May 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Android တွေကို Root နိုင်တဲ့ 007Root Tool 3.1
Maung Pauk at 11:34:00 AM 2
ကျွန်တော် ဒီ Software ကို ဒီနေ့မှ တွေ့လာတာပါ.. Root လုပ်နိုင်တဲ့စာရင်းကို အောက်မှာဖေါ်ပြထားတယ်.. သူ့ပုံစံက UnlockRoot နဲ့တူတယ်.. Unlock Root ထက်ပိုစွမ်းတယ်လို့ ဖုန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောတယ်ဗျ.. UnlockRoot ကို တရုတ်နည်းနဲ့ ကွန့်ထားတာထင်တယ်.. ကျွန်တော် မစမ်းရသေးပါဘူး.. မိတ်ဆွေများ စမ်းပြီးသုံးဖို့တင်ပေးလိုက်တာပါ.. Root နည်းကတော့ Driver သိရမယ်.. USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကိုအမှန်ခြစ်ထားရမယ်.. ဖုန်းကို Fast Boot Mode ဝင်ပြီး USB နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ရမယ်.. ဒါဆို Root လို့ရပြီလို့ ရေးထားပါတယ်..
Galaxy Note2 (i7100)
Galaxy Note (I9220
Moto Defy (MB525)
Moto Atrix (MB860) S
Download : 62.1 MB
HTC HTC Rooting Rooting နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 11:01:00 PM 0
Lock/Unlock Password ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 9:12:00 PM 4
မည်သည့် Android ဖုန်းမဆို Pattern Lock , Passwords Lock ,
Pin Lock များကို ဖျက်ထုတ်ပေးနိုင်မယ့် Application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ပေးထားတဲ့ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး ရလာတဲ့ ZIP ဖိုင်ကို မဖြည်ဘဲ SD Card ထဲသို့
ထည့်ကာ CWM (Recovery Mode ) သို့ဝင်ပြီး
Install လုပ်ပေးလိုက်ရုံဖြင့် အဆင်ပြေ သွားမှာ
Credit to : Mobile World
Logger တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး၊ လုံခြုံရေးအချက်အလက်တွေကို ခိုးယူတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. Hacker တွေဟာ ကိုယ့်ဆီက Bank Account နံပါတ်တွေ၊ Password တွေကို ခိုးယူဖို့အတွက် Malware တွေ၊ Trojan တွေပို့လွှတ်ပြီး တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပါတယ်.. သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ညင်သာလွန်းတာကြောင့် တော်ရုံလူ မသိနိုင်ပါဘူး.. Zemana AntiLogger ကတော့ အဲဒီ Logger တွေရဲ့ ရန်က အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. Logger အမျိုအစားတွေ ဖြစ်တဲ့ SSL Logger, Webcam Logger, Key Logger, Screen Logger, ClipBoard Logger တွေအားလုံးကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ပြီး အချိန်မီ တားဆီးကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..
Maung Pauk at 5:24:00 PM 2
USB Drive တွေဟာ Media Device တစ်မျိုးအဖြစ် လူသုံးများလျက်ရှိပြီး အချက်အလက်တွေ သယ်ဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူသက်သာပါတယ်.. ဒီလို USB Drive တွေဟာ ကွန်ပျူတာအမျိုးအမျိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက် အသုံးတည့်တဲ့ ဖိုင်တွေရော. အသုံးမတည့်တဲ့ Virus ဖိုင်တွေရော အားလုံးကို ကူးလူးဆက်နွယ်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်.. ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Virus ထိမှာစိုးလို့ USB Drive တွေ မတပ်ဆင်ရဘူးလို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေလည်း တွေ့မိပါရဲ့. ဒီလိုကန့်သတ်ထားရင် Network ချိတ်ဆက်မထားတဲ့ Computer တွေကြား အချက်အလက်သယ်ဆောင်ဖို့ CD,DVD ပဲရှိပါတော့တယ်. ဒါတောင် Drive တွေကောင်းနေမှ.. ဒီတော့ဗျာ.. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို USB Drive တွေတစ်ဆင့် Virus မဝင်စေချင်ရင် USB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကောင်းစား Antivirus software တစ်မျိုးလို့တင်စားရမယ့် USB Disk Security ကို ၉၀% ကျော်လောက်သုံးနေကြတယ်ဆိုတာ မမှားလောက်ပါဘူး.. ခု USB Disk Security 6.3.0.30 Full Version ထွက်လာလို့ မိတ်ဆွေများကို ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်...
Download : 4.24 MB
Maung Pauk at 5:03:00 PM 2
Stellar Phoenix က Recovery Software လောကမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၁)စွဲနေတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ.. အခု Excel တွေချည်း Recover လုပ်ပေးမယ့် Stellar Phoenix Excel Recovery 4.1 ကို ထုတ်လုပ်ထားပြန်ပါပြီ.. Excel ဖိုင်တွေတော်တော်များများ ဟာ အဖိုးတန် ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Program တစ်ခုပါ.. ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးစာရင်းဇယားတွေ၊ သချာင်္ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ တွက်ချက်မှု ကိန်းဂဏန်းတွေ တော်တော်များများကို Excel နဲ့ ရေးသားလေ့ရှိကြပါတယ်.. ဒီလို ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Excel ဖိုင်တွေကို မှားဖျက်မိတာ၊ Format ချမိတာ၊ Virus တွေလက်ချက်နဲ့ပျက်သွားတာတို့ကို ပကတိ အကောင်းအတိုင်း ပြန်လည်ရယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် Excel 2013 ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ 2000, 2003, 2007, 2010 တွေကထုတ်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားအားလုံးကို ရယူပေးနိုင်ပါတယ်.. Windows 7, Vista, Server 2003, XP, 2000 and NT တွေမှာ Compatible ဖြစ်ပါတယ်..
Setup Download : 3.35 MB
Security Tools USB ဆော့ဖ်ဝဲများ
ကွန်ပျူတာရဲ့ USB Port တွေကို Removable Access Tool နဲ့ Lock ချထားရအောင်
Maung Pauk at 8:37:00 PM 1
2. ချိတ်ခွင့်တော့ပေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲက USB Drive ထဲကို Data ကူးယူသွားခွင့် မပေးချင်ဘူးလား.
3. ခွင့်ပြုထားချင်ရင်လည်း ရပါတယ်..
4. Autorun ကိုလည်း ပိတ်ထားနိုင်တယ်..
5. ကိုယ့်ထဲကို ချိတ်လာတဲ့ USB Drive ထဲမှာ ဖိုင်တွေ ဝှက်ထားလို့မရအောင် လုပ်မယ်လေ.
6. Setting ကို ဝင်လို့မရအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်တယ်..
7. ဒီကောင်ကို စီမံဖို့အတွက် Password နဲပိတ်ပြီးကာကွယ်ပေးထားလို့လည်း ရသေးတယ်..
Lock/Unlock USB Utilities ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:43:00 PM 4
Tusfiles ((Download with TusFiles accelerator and get recommended offers. ဘေးက အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပြီးမှ ဒေါင်းပါ)
YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video, MySpaceTV နဲ့ အခြား Online Links တွေဆီက Video ဖိုင်တွေကို အရည်သွေးပြည့်၊ အမြန်ဆုံးဒေါင်းပေးနိုင်တဲ့ YouTube Video Downloader PRO 4.1 ဖြစ်ပါတယ်.. ဒေါင်းရုံတင်မဟုတ်ဘဲ Video Format အမျိုးအမျိုးကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
Download , convert and play your videos on YouTube
YouTube Downloader isasoftware that allows you to download videos from YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video, and many others and convert them to other video formats.
The program is easy to use, just specify the URL of the video you want to download and click the Ok button! It also allows you to convert downloaded videos for Ipod , Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, Xvid and MP3.
You can use YouTube Downloader to download the videos of your choice from home, at the office or at school.
-Download videos from YouTube, Facebook, Google Video, MySpaceTV, and many others
-Allows you to download YouTube videos to what you need to be 18 years or older
-Convert videos to Ipod, Iphone, Ipad, PSP, Cell Phone, Windows Media, Xvid and MP3
Download : 11.6 MB
Maung Pauk at 7:20:00 PM 0
Y210,Y210C,Y210S အားလုံးကို One Click နဲ့ Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာ အကုန်ထည့်မယ်
Maung Pauk at 6:42:00 PM 5
ဒီပိုစ့် အတွက် နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
ကျနော် သိလို့တက်လို့ တင်တာမဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ..ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသက်သက်ပါနော်
ကျနော် နေတာက မလေးရှားပါ ဖုန်းတွေ ကလိနိူင်ဖို့ အတွက် အလွန်ကို ခဲယဉ်းပါတယ်
ကျနော် နဲနဲလောက်ပဲ သိပါတယ် မကျွမ်းကျင်ပါဘူးကွယ် ..အဟီး
အဲဒါကြောင့် သိတဲ့တက်တဲ့ ကျနော် ညီငယ် တွေ အကိုတွေ ဆီကနေ ပြန် တင်လိုက်တာပါ
မိမိဖုန်း အခက်အခဲရှိလို့ မေးချင်တယ်ဆိုရင် ရှယ်လာတဲ့ ပိုစ့်တွေမှာ မူရင်းလင့် ကိုချိပ်ထားပေးပါတယ်
တိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ ဆွေးနွေးရင် သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာမယ်ထင်ပါတယ် နော်
ကျနော် ဒီလို ပြန်ရှယ်ရတာလဲ နောင်တချိန် လိုအပ်ရင် အလွယ်တကူရနိူင်အောင်လို့ပါ ။
Y210 Series One Click Root Fonts(Setup).rar
ကဲပြီးသွားရင်တော့ rar ကိုဖြည်လိုက်ပါ။
Set up.exe လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်..
Install ဆွဲနေရင်း Serial Key တောင်းရင် mmsd ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
Install ဆွဲပြီးသွားရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ Shockcut တွေ့ပါလိမ့်မယ်…
ဖုန်းကို Unknown Sources On နဲ့ USB Debugging ON ထားပါ။
Volume up + Power နဲ့ Fastboot Mode ၀င်ပြီး ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Software ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင် Root Access,Myanmar Fonts,Frzoenkeyboard အကုန်ရပါပြီ။
OS VMware ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 8:11:00 PM 0
VMware Workstation ဆိုတာ Windows နဲ့ အခြား OS တွေကို တင်ပြီးသုံးစွဲလို့ရတဲ့အတွက် လူသုံးများတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. အရင်ကလည်း ဗားရှင်းအသစ်ထွက်တိုင်း တင်ဖြစ်ပါတယ်.. ခု ဗားရှင်း 9.0.2 ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
System requirements တွေကတော့.
2GB RAM minimum/ 4GB RAM recommended ဖြစ်ပြီး တင်နိုင်တဲ့ OS တွေကတော့-
Setup Download Via Dev-Host :
Part I (160 MB)
Part II (160 MB )
Part III ( 86.43 MB)
Design Editor ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:52:00 PM 0
ACDSee ကို အရင်က Photo Viewer အနေနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ကြတာပါ.. Photo Editor ကိုတော့ လူသိနည်းကြပါလိမ့်မယ်.. ခု Photo Editor က Photoshop တို့လို နာမည်မကြီးသေးပေမယ့် Layer တွေကို စိတ်ကြိုက်စီမံနိုင်ပါတယ်.. Digital Camera တွေနဲ့ ရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ Exposure သိပ်အားနည်းလွန်းတာတွေ၊ Red Eye ဖြစ်တာတွေ awkward framing, tolerance, blemishes, rashes တွေအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..
some key features of "Acdsee Photo Editor":
· Howtos: guided tours that teach you to be creative with your fotos.Muestran how to perform different tasks creative with your photos, step by step, from beginning to end.
· Variations Adjustment / Filter: Displays up to 8 different previews of your original photo on screen, each preview showingadifferent variation of the effect, adjust or filter being applied.
· Batch editing: you can apply any settings / filters you want to use more than one photo atatime with justafew clicks.
· Image Cart: displays thumbnails of the photos you're working, so you can see the work you have already done.
· Vignette tool: create stunning portrait-style photos that can get into your family album, or used for gift cards or pages inadraft family tree.
· Cookie cutter:acomposition quickly cut into fun shapes like letters and numbers, then use them as titles, dates or titles on your photos fun.
· Auto-settings: One-click Auto Color Balance Automatic, automatic levels, focus, or auto contrast.
· Repair Tool: Easily remove blemishes, stains or scratches fromaphoto and get the results you're looking for almost instantly.
· Support text: add text smart or funny descriptive álbumes.Agregar your horizontal and vertical text size and font style of your choice.
· Property Bar: shows all available options for the tool used, so it can deform and customize the effect to get the creative results you want.
· Gradients: apply predefined gradients, colors or create your own and apply them to text and objects on your photos foracolor scheme in layers.
Download : 64.69 MB
Anti Spyware Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:36:00 PM 0
Programming Softwares ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:32:00 PM 0
Programmer တွေ၊ Software Developer တွေ၊ Web Designer တွေ သုံးတဲ့ Notepad++ 6.3.3 ဖြစ်ပါတယ်.. အသုံးလိုသူများ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ..
Feature Notepad++ 6.3 Final
Download : 6.52 MB
Editor Video Editing ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 7:16:00 PM 0
paing bo bo: အစ်ကိုပေါက်ရေ ...Ulead Vedio Studio software လေးတွေရှိရင် ဝေမျှ ပေးပါဦး အစ်ကိုရေ ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
တစ်ချိန်တစ်ခါက Ulead ကို အသုံးတော်တော်များခဲ့ပြီး ခုလည်း တစ်ချို့က အကြိုက် သုံးနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်.. Video Editing လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူလည်း ဆရာတစ်ဆူပါပဲ.. ကျွန်တော်ကတော့ မသုံးတတ်ပေမယ့် သုံးတတ်သူတွေ သုံးနေတာမြင်ရတာ သိပ်ကျေနပ်စရာ Software ကောင်းတစ်ခုပါ..
Editing + DVD Authoring All the editing and authoring tools found in the standard version, PLUS unique and powerful features including full HD DVD authoring, AVCHD support, Dolby Digital 5.1 surround sound andafull set of easy corrective and creative filters.
Link 1 ( 170.64 MB )
Link2( 136.9 MB)(Password=OWTPK)
Link3( 4shared )
အပေါ်ကလင့်တွေမှာ ဖိုင်ဆိုဒ်ချင်းမတူတာတွေ့ရပါတယ်. ဘာကွာလဲ ကျွန်တော်မသိပါ.. Connection အခက်အခဲကြောင့် ကျွန်တော် ဒေါင်းပြီး မစမ်းပေးလိုက်နိုင်တာကို နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်..
Fonts PC Fonts နည်းလမ်းများ မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ
Maung Pauk at 6:29:00 PM 0
ဇေယျာ: Ubuntu OS မှာ မြန်မာဖောင့်သုံးချင်လို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ကူညီပါအုံးကိုပေါက်ရေ..
Ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…ပထမဆုံးနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ zawgyi font ကို zawgyi-keyboard.googlecode.com ကနေသွားဒေါင်းလိုက်ပါ zawgyi keyboard-0.3.3 tar.gz ဆိုတဲ့ ကောင်ကိုဒေါင်းပါ။ဒေါင်းပြိးသွားရင် ရတဲ့လာတဲ့ ကောင်ကို desktop မှာသွားတင်ထားလိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့ zawgyi font install လုပ်ဖို့တွက် terminal ထဲဝင်ရပါမယ် ctrl+Alt+t နှိပ်လိုက်ပါက terminal ပေါလာပါမယ် ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး terminal ထဲတွင် cd ~/Desktop ဆိုတာ ရိုက်လိုက် ပါ ပြိးရင် ls ဆိုပြိးထပ်ရိုက်လိုက်ပါကာ အောက်ကပုံတိုင်းမြင်ရပါမယ်..
ဒီ tar xzf zawgyi_keyboard-0.3.3.tar.gz ဆိုတဲ့ command လေးကို ရိုက်ပြိး enter ခေါက်လိုက်ပါ အောက်ကပုံလိုမြင်ရပါမယ်
tar xzf ဆိုတာကဖိုင်ကိုဖြေဖို့သုံးလိုက်တဲ့ command ပါ ပြိးရင် ls ဆိုပြိးရိုက်ထည့်လိုက်ပါက zawgyi ဆိုပြိးဖိုင်တစ်ခုတိုးလာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ပြိးရင်ကျွန်တော်တို့ zawgyi font ကိုစပြိး install လုပ်တော့ မှာပါ။ sudo python zawgyi_keyboard.py လို့ရိုက်ပြိးenter ခေါက်လိုက်ပါက အောက်က တိုင်းမြင် ရပါလိမ့်မယ်
Password တောင်းပါလိမ့်မယ် password ရိုက်တဲ့ခါ စာလုံးကိုမြင်ရမှာမပာုတ်ပါဘူး ရိုက်ပြိးရင် enter ပေ့ါနော်အပေါကပုံတိုင်း မြင်ရပြိဆိုရင် install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တွက် I လို့ရိုက်ပြိး enter ခေါက် လိုက်ပါအောက်ကပုံတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ် အောက်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့ Removing previous installed zawgyi desktop file..ဆိုတာက ကျွန်တော့်မှာ zawgyi သွင်းပြိးဖြစ်လို့ပါ . ပြိးသွားရင်တော့ restart ချလိုက်ပါ zawgyi font သွင်းပြိးသွားပါပြိ
Credit to : မြန်မာ IT လူငယ်များ
ကိုဇေယျာ အပါအဝင် အခြား လိုအပ်သူများအတွက် Ubantu OS မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း စာအုပ်ကို လည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Myanmar Font & Key Magic ကိုလည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. လိုအပ်သလို သုံးလို့ရအောင်လို့ပါ..
Download Zawgyi Keyboard and Font:
Download Myanmar Font & Key Magic :
Design Web designer ဆော့ဖ်ဝဲများ
Website တွေ ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ Artisteer 4.1.0.60046 Full
Maung Pauk at 6:03:00 PM 0
Artisteer ဆော့ဖ်ဝဲက Joomla, Blogger, Wordpress, Drupal လေးခုလုံးနဲ့ရေးရတဲ့ Website တွေကို ဒီကောင်တစ်ခုတည်းနဲ့သုံးပြီးရေးနိုင်ပါတယ်.. XHtml, CSS ကုဒ်တွေနဲ့ ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ရေးဆွဲနိုင်ပြီး Dreamwaver, Photoshop တို့လို ကြီးမားတဲ့ Software တွေ မလိုဘဲ CMS Template တွေ၊ Wordpress Themes တွေကို လှလှပပသေသေသပ်သပ်ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်.. Firfox, Opera, IE, Google Chrome, Safari စတဲ့ Browser တွေကို Support ပေးနိုင်ပြီး XHTML 1.0 Transitional, CSS 2, Section508 (partially) စတဲ့ Standard ကို Support ပေးနိုင်ပါတယ်.. png ဖိုင်တွေကို Transparent လည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
လိုအပ်တဲ့ Requirements တွေကတော့-
· Intel or AMD 1500 MHz or higher
· 100 MB of free space on the hard drive
· Microsoft. NET Framework ဖြစ်ပါတယ်..
Artisteer is the first and unique product of automation of web design which instantly creates websites templates and fantastic looking blog. It isapowerful software that makes youaprofessional Web designer of websites, WordPress themes and blog templates.
Artisteer allows its users to easily create templates and designs fantastic looking website within minutes, without even having to know anything about editing graphics or HTML.
With Artisteer you immediately becomeaWeb design expert, editing and fragmentation in the graphics, coding XHTML and CSS, and creating CMS templates and WordPress themes - all in minutes, without Photoshop or Dreamweaver, and no technical skills.
Use Artisteer to generate web design attractive ideas, adjust the generated designs using many included elements, backgrounds , photo objects and buttons, create professional code and fully supports HTML and CSS and export your design in order to create great looking templates for websites and blogs. Create wonderful designs has never been easier.
Download : 120.74 MB
Maung Pauk at 6:44:00 PM 0
လိမ္မော်ရောင်ကိုကြိုက်တဲ့ Blogger တွေအတွက် OrangeLine Template ဖြစ်ပါတယ်.. 3-Colums ဖြစ်ပြီး Drop-Down Menu တော့ မပါဝင်ပါဘူး..
Maung Pauk at 6:40:00 PM 0
အနက်ရောင် Themes ကိုကြိုက်တဲ့ Blogger များအတွက် Btemplate ရဲ့ Virtuale အမည်ရှိ Template ဖြစ်ပါတယ်.. 2-Colum ဖြစ်ပြီး Drop-Down Menu ပါဝင်ပါတယ်.. Future Slide ပါဝင်လာတဲ့အတွက် ခေတ်ဆန်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Btemplate ကထုတ်တဲ့ 2- Colum Blogger Template ဖြစ်ပါတယ်.. Sidebar တွေက ဘယ်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရှင်းလင်းသေသပ်ပါတယ်.. Drop Down Menu တော့ မပါဝင်ပါဘူး..
Maung Pauk at 6:31:00 PM 0
btemplates ကထုတ်တဲ့ Sevim Template ဖြစ်ပါတယ်.. Blogger အတွက်ဖြစ်ပြီး 2-Colum အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်.. Drop Down Menu တွေပါဝင်ပါတယ်.. Blogger များအတွက် အလွယ်တကူရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ
Hack Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
RAR Password Unlocker 4.2.0.0 Full
Maung Pauk at 12:35:00 PM 0
WinRar ဖိုင်တွေရဲ့ Password တွေကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး Unlock လုပ်ပေးတဲ့ RAR Password Unlocker ဖြစ်ပါတယ်.. ဗားရှင်း 4.2.0.0 Full တွေ့လာလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. အသုံးပြုနည်းကတော့ ရှင်းပါတယ်.. Browse မှာ Password မသိတဲ့ rar ဖိုင်ကို ရွေး၊ ပြီးရင် Open ကိုနှိပ်ပါ..
Setup Download : 2.8 MB
DataFileHost (Use our download manager and get recommended downloads ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီးမှ ဒေါင်းပါ)
Windows Server 2008 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
Maung Pauk at 12:18:00 PM 2
ဆရာဦးဇော်လင်း ရေးသားတဲ့ Windows Server 2008 အသုံးပြုနည်း စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်.. Server အသုံးပြုနေသူတွေ၊ Network သမားတွေ၊ MCITP စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေသူတွေ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ပါ..
Maung Pauk at 8:01:00 PM 0